स्थायी कमिटी बैठक अगाडी प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको भेट , के भयो त कुराकानी? — SuchanaKendra.Com
स्थायी कमिटी बैठक अगाडी प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको भेट , के भयो त कुराकानी?
काठमाडौं। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर फर्केलगत्तै पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको हो ।
माओवादी केन्द्रको आजको बैठकले मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउने एक नेताले बताए । माओवादीले यसअघि जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाइसकेको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भवतः बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकार सञ्चालन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदार दलहरूसँग मन्त्री बन्नेहरुको नाम माग्नु भएको छ ।